दलित समुदायले छोएको पानी नचल्ने बस्तिमा दलितसंगै दशैँको टीका र खाना ! - सुदूरखबर डटकम
दलित समुदायले छोएको पानी नचल्ने बस्तिमा दलितसंगै दशैँको टीका र खाना !
label सुदूरखबर संवाददाता query_builder October, 22 2018
बझाङ, कात्तिक ५ । बझाङको साईपाल गाँउपालिका पछिको विकट गाँउपालिकाका रुपमा चिनिने सुर्मा गाउँपालिकामा अहिले पनी रुढीबादी परम्परा कायमै छ ।
दलितले छाएको पानी नचल्ने, दलितहरुले मन्दीरभित्र बस्न नपाउने गैरदलीतहरुको घरको अगनसम्म पाइला टिकाउन नपाउने परम्मपरा अहिले पनि कायमै छ । दलितले गैर दलितको घर छुँदा अनिस्ट हुने गाँउमा नराम्रो हुने गैर दलितहरुले दलीतको शरीरमा छाइएको खण्डमा गैर दलितहरुले घरभित्र बस्दा न्ुहाएर मात्रै पस्ने र गाईको गहुँत(पिसाब) शरीरमा छर्केर र खाएपछि मात्रै चोखो भएर घरभित्र बस्ने प्रचलन अहिले पनी सुर्मा गाँउपालिका लगायत बझाङका ग्रामीण बस्तिहरुमा कायमै रहेको छ ।
यस रुढी बादी परम्पराको अन्त्य गर्नका लागि सुर्मा गाउँपालिकाकी शान्ति बोहरा पुजाराले भने यस वर्षको दशैँ दलित बस्तिमा नै मनाएकी छन् । सुर्मा गाँएपालिका–३ मा रहेको गैरी गाँउको दलित बस्तिमा गएर पुजाराले दलितहरुसंगै दशैको टिका र जमरा लगाएर मनाउनुका साथै खानपीन समेत दलित बस्तिमा मनाएको स्थानीय करन दमार्इंले बताए ।
समाज परिवर्तन गर्नका लागि भाषण गरेर भन्दा आफूबाट नै परिवर्तन गरे मात्रै सम्भव हुने भन्दै आफुूले दलित बस्तिमा दशैँ मनाएको पुजाराको भनाइ छ । विगतका बर्षहरु भन्दा यस बर्ष को दशै निकै रमाईलो आफुलाई लागेको स्थानीय संगीता दमाईले बताए । ‘सुर्मा गाँउपालिकाका कुनै पनि गैरदलितहरुले अहिलेसम्म हाम्रो घरको आगनसम्म पाइला टेकाएका थिएनन् । दशैँको दिनमा नै शान्ति बोहरा पुजाराले घरभित्रै बसेर टिका जमारा लगाउनका साथै हामीहरुले पकाएको खाना समेत खानुभयो ।’स्थानीय बासिन्दा दिपकबहादुर दमाईंले भने, ‘हामीलाई पुजारले गरेको यो कार्यले थप हौसला समेत मिलेको छ । छुवा छुत गर्दा के कस्तो अनिष्ट पो हुन्छ भनेर डर लाग्थ्यो तर केही हुदो रहेन छ खाली यो रुढीबादी परम्परा मात्रै रहेछ । हामीलाई थप खुःसी लाग्यो । यो समाजमा अहिले पनी दलीत ले दलितलाई समेत छुवाछुत गर्ने चलन रहेको छ । हामीहरुले नै परिर्वतन गर्न सकिँदो रहेछ ।’
छुवाछुत अन्त्यका लागी गैरदलितलाई दोष दिनु भन्दा दलीतहरु विच हुने छुवाछुत अन्त्य गर्न जरुरी रहेको उनको भनाइ छ । ‘पुजार परिवार भएर पनि दलित बस्तिमा दशै को टीका लगाउनु हाम्रो पकाएको खाना खानु हाम्रो हातको पानी खानु हाम्रा लागी ठूलो उपलब्धीको कुरा हो ।’ उनले भने, ‘यसले हामीलाई थप आत्म बल पुगेको छ । ’
सुर्मा गाँउपालिकाका गाँउहरुमा अहिले पनि लुहारले छोएको पानी दमाईले बचाउँदैनन् । तर, अब देखि आफूहरुले यसको अन्त्य गर्ने यहाँका दमाई परिवारको भनाइ छ । शान्ति बोहरा पुजाराले भने समाज परिवर्तन गर्नका लागि अब समाज सेवी र राजनीतीक दलका नेता कार्यकर्ता र अहिलृका जनप्रतिनीधीहरुले लाग्नु जरुरी रहेको बताएकी छन् ।
पुजारले दलित बस्तिमा दशैँ मनाउँदा सुर्मा गाउँपालिकाका केही गैरदलीतहरुले केही बुढापाकाहरुले भने विरोध गरेकार पुजारको हातको समेत पानी नखाने भन्ने गरेको पुजाराले बताइन् । पुजाराको माईती घर सुर्मा गाँउपालिका–१ लमण्ड र पोईली घर सुर्मा गाँउपालिका–४ ठकुन्डाडा हो । पुजारा एकल महिला पनी हुन् । केही समय अघि मात्रै हलो जोत्न सफल भएकी पुजार नेपाल महिला संघकी जिल्ला अध्यक्ष, नेपाली कांग्रेस जिल्ला कार्य समितिकी सदस्य पनि हुन् ।